Xitaa sababo intaa ka badan oo loogu beddelo Xafiiska Libre | Laga soo bilaabo Linux
Patrick Bustos | | Aplicaciones
Maqaalka cajiibka ah ee uu qoray Aynu adeegsanno Linux loo yaqaan Sida loo fududeeyo ka-wareejinta MS Office ee LibreOffice Waxaan awoodnay inaan ogaano sababaha ay u fiicnaan laheyd inaan u wareegno LibreOffice, laakiin runtu waxay tahay inay jiraan kun iyo hal sababood oo kale oo loogu wareejiyo meeshan ammaanta leh - buunbuunin maayo - xafiiska xafiiska.
Digniin: Maqaalkani wuxuu ku wajahan yahay adiga, qof caadi ah oo ay tahay inuu maalmahaaga ku qaato isticmaalka Windows adigana, dhalinyaro niyadsami ah oo, adigu naftaada ka sakow, waa inay ku rakibaan MS Office dhamaan xubnaha qoyskaaga ee isticmaala Windows maxaa yeelay waxay ahayd warshad lagu rakibay
Lix doodood oo wanaagsan oo loo beddelo Xafiiska Libre
1 - Isticmaal wanaagsan oo adeegsade ah:
Tan iyo markii aan yaraynay waxaan barannay in loo isticmaalo ereyga qaab gaar ah, laakiin 2007 Microsoft waxay go'aansatay in ay hirgaliso isdhexgalka Ribbon taas oo siinaysa qayb aad u qabow oo bilicsanaanta leh, laakiin runti ma horumar baa? taasi waa in la dhaho, guud ahaan, dhammaan codsiyada waxay isticmaalaan bar menu leh waxyaabo gaar ah (sida Faylka, Tifatirka, Aragtida, iwm.) Maxaa u diidaya MS Office? Maxay nooga sifeynayaan xumbadayada raaxada? Waad ku mahadsantahay wanaag, LibreOffice waxay ku dhagantahay caqliga guud ee jira markii la qorsheynayo isdhexgalka waxayna na siineysaa mid aan u baahneyn inaan qaadano labo toddobaad si aan ula qabsano
2- Waxaan iska ilaalinaa sharci darro (burcad badeed):
Aynu wajahno, Latin America guud ahaan kuma qabsanayno bixinta MS Office. Xaqiiqda - LibreOffice - kama ilaalineyno oo keliya sharci-darro (in lagu lumiyo raadadka dambiyada), laakiin sidoo kale waxaan iska ilaalineynaa bixinta a tuug farsamo yaqaan si loo rakibo Xafiiska Burcad badeedda (maxaa yeelay dhab ahaan sameynta rakibida burcad badeedda way ka dhib badnaan kartaa midda caadiga ah aakhirkiina waxay ku dhamaanaysaa kharashka nagu baxa dhogorta)
3- Way ka sii fiicantahay
Qodobkani waa - laga yaabee - in yar oo laga doodi karo maxaa yeelay waxay in badan ku tiirsan tahay barxadda aan ku shaqeyno, laakiin runtu waxay tahay in softiweerrada aan loo baahnayn in lagu jabsado shaqada ay had iyo jeer ka shaqeyn doonaan si ka fiican sidii rakibid aan sharci ahayn maxaa yeelay adigu kaliya maahan inaad taabato ama doqon dlls, mana aha doqon diiwaanka ama faylalka kale ee qaabeynta ama wixii la mid ah.
4- Taageero farsamo oo fiican:
Ahaanshaha barnaamij bilaash ah oo bilaash ah waxaa jira beel taageero aad u xoog badan leh. Si kale haddii loo dhigo, inta ay MS ku jiraan waqti ayey ku abuuraan buugag ku qoran dhammaan luqadaha oo ay ku jiraan dhammaan xalalka suurtagalka u ah dhammaan dhibaatooyinka soo ifbaxa, bulshada dhexdeeda waxaas oo dhan waxaa lagu qabtaa waqtiga dhabta ah ama horay ayaa loogu sameeyaa waxa-guud ahaan – xalalka ayaa dhaqso ku imaan kara.
5 - Suurtagalnimada caawinta:
Ahaanshaha Meel Furan, waxaan leenahay suurtagalnimada dhabta ah ee wadashaqeynta si loo hagaajiyo qolka. Tusaale ahaan, waxaan kaa caawin karnaa dukumiintiyada, soo sheegida khaladaadka, soo jeedinta isbeddelada qeybta garaafka, iwm, iyadoo la hubo in (inbadan) talooyinkayaga la dhageysan doono.
6 - Qalab la'aan: Tani waa qodob kale oo laga doodi karo laakiin runtu waxay tahay in markii la rakibayo MSOffice, aan heli karno rakibid (haddii aanaan dheg u dhigin) waxyaabo badan oo aanan u baahnayn ama aanaan xitaa u adeegsan doonin, sida Access, Outlook, Onenote, iwm, sababtoo ah runta inta badan, waxaan kaliya u baahanahay erey, Excel iyo PowerPoint.
Marka la soo koobo, waxaan u maleynayaa in markaan wacdinta sameynayo, aan had iyo jeer bixinaynin doodaha ugu fiican, sidaa darteed waxaan rajaynayaa in kuwan aan halkan ku faahfaahiyey ay u adeegaan adeegsadayaasha MSOffice in kaliya aysan jirin wax kale oo bilaash ah laakiin sidoo kale ay jiraan habab ka fiican oo lagu shaqeeyo. Miyaad ogtahay wax doodo dheeri ah?
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Xitaa sababo badan oo loo beddelo Xafiiska Libre
Runtu waxay tahay anigu waxaan taageersanahay isticmaalka Libre Office, laakiin waxaan u maleynayaa in doodahaaga badankood aysan ansax ahayn marka laga reebo qaybta softiweerka.
Xafiiska Microsoft wuxuu aad uga badanyahay xafiiska Libre Office / Open inta badan qeybaheeda, waxay aad ugu dhowdahay in la yiraahdo waxa kaliya ee xafiiska lacag la'aanta ah uu kaga sareeyo xafiiska Microsoft waa rukhsadiisa.
Waad ku mahadsantahay inaad iga badbaadisay dhibaatada diidmada RA'YIGA qofka qoray shaqsigan qoonsaday ee biyaha meel walba ka dhigaya.
Waxaan u adeegsadaa xafiiska libre maxaa yeelay waan jeclahay, waxa aniga xiisaha iigu yarna waa liisanka, maxaa yeelay haddii aan doonayo inaan ku jajabiyo M. Office daqiiqad gudaheed, mana daneeyo haddii milyaneerka Bil Gates uu helo lacag iyo in kale.
David iyo saaxiib dijo
Ku jawaab David Andrade
Uma maleynayo inaan xumahay, kaliya ma ihi qareen xuquuqda daabacaada Microsoft.
Waan ka xumahay, laakiin kuma raacsani su'aasha ah kee baa fiican oo waxaan doorbidayaa qoraaga maqaalka. Waa run in MSOffice ay ka dhameystiran tahay oo ay xulashooyin dheeri ah leedahay, laakiin boqolkiiba 95% dadka dhimanaya ee Libre Office waa in ka badan inta ku filan. Waxaan ku siinayaa isbarbar dhig: Maxaa ka wanaagsan Audi A6 ama Ford Fiesta? Caqli ahaan, tan hore ayaa ka raaxeysi badan, socodsiisa wax badan, iwm, laakiin haddii aad rabto inaad kaliya shaqo tagto oo aadan haysan malaayiin lacag ah, tan labaad ayaa ka fiican. Wax la mid ah ayaa ku dhaca barnaamijyada, waxaan u adeegsanaa xafiiska 'Libre Office' wax kasta oo shaqada ka socda, aad ayaan ugu faraxsanahay, sidoo kale waa bilaash, laakiin waxaan u maleynayaa in shaqooyinka qaarkood ee gaarka ah ee MSOffice ay yihiin kuwo aan laga maarmin.
Dhinaca kale, Xafiiska Libre ayaa had iyo jeer la barbar dhigaa waxa MSOffice ay qabato, laakiin in yar baa dhinaca kale ka qabta, taas oo ah: Is MS-cross-platform, ma wuxuu si fiican u maareeyaa qaababka dukumiintiyada Libre Office, miyay ku cusboonaysiiyaan bilaash, iwm iwm ? Iyada oo qodobadan ku jiraan miisaska isbarbardhiga natiijadu xoogaa way isbeddelaysaa.
Waa hagaag, isla waxaas oo kale maxaad safar ugu bixi lahayd, Audi A6 ama Ford Fiesta? Waa hagaagsan tahay, oo leh Audi A6 🙂
Isla waxbaa igu dhaca aniga: LibreOffice waxyaabaha fudud, iyo MSOffice waxyaabaha halista ah. Ma garanayo, laakiin inkasta oo aan ahay Linux aad u adag, aniga iguma adka aniga inaan aqoonsado waxyaabaha wanaagsan, MSOffice-na waa qaybta ugu fiican ee xafiiska ilaa maanta.
Ku jawaab chechi
Waxay ila tahay inay tahay mid si gaar ah u shaqeysan gaar ahaan qodobka # 1 «Si kafiican isticmaalaha isticmaalaha» Ka hor ama maxay? Kawaran hadaan jeclahay isku xidhka Ribbon?
Wuxuu boostada ugu celiyaa "Sababaha aan u doorbido Libreoffice", in qofkeen kastaaba ka fikiro naftiisa.
Mid aad u qaraabo ah oo ah kan koowaad iyo tan saddexaad. Marnaba uma baahnin inaan la shaashado diiwaan kasta ama dlls si aan u shaqeeyo; aad uga yar kan "hacks".
Ku saabsan isdhexgalka, si fiican ... dhowr sano uun sug. Carruurta maanta, dadka waaweyn ee berrito. Markaa "waxaan ku soo wada kornay isdhexgal waana sababta aan u badali karin" macno dambe ma sameynayso, si fudud maxaa yeelay waxaa horey u jiri doona jiil ku kori doona isgaarsiinta xarigga. Xitaa sidaa oo ay tahay, waan ku raacsanahay qodobkaan, mana ahan horumarintiisa, taasi waa, waxaan aaminsanahay in mid ka mid ah sababaha aad u rabto inaad u adeegsato LO ay tahay is dhexgalka, maxaa yeelay kuma aadan baran Ribbon; laakiin taasi kama dhigeyso "ka sii fiican".
Qodobbada intiisa kale, gebi ahaanba waan oggolahay. Dabcan, waan ku dhaaran karaa tan iyo markii aanan garaneyn-inta nooc ee aad dooran karto barnaamijyada aad ku rakibayso qolka, iyada oo aan loo baahnayn siyaado dheeraad ah.
Runtu waxay tahay inaan la wadaago inta badan qodobbada laakiin is-dhexgalku maahan, xargo waxaan ku heli karay wax kasta oo aan ugu baahdo si fudud maadaama wax waliba ay leeyihiin menu-keeda oo si fiican loo dalbaday iyo astaamo la fahmi karo markii ugu horreysay, markii ugu horreysay. Waxaan u adeegsadaa LibreOffice inaan ku qabto shaqo iskuul, markii aan arkay interface-ka waxaan damiyay kumbuyuutarka (Maaddaama aan isticmaalayay Ubuntu) waxaanan aaday Windows-ka si aan u isticmaalo Microsoft Office, nasiibdarradayda waqtigaas dhammaan faylalka qaabeynta Office-ka waa la tirtiray sabab la'aan iyo dib uma cusbooneysiin karo, kumana rakibi karo LibreOffice sidoo kale waxaan kaliya ugu isticmaali karaa Linux.
Waqtigan xaadirka ah LibreOffice uma muuqato mid fool xun aniga laakiin waxaan jeclaan lahaa runta inay u hesho mawduuc LibreOffice oo u eg xarig si ay ugu raaxaysato ama ay jiraan 2 ikhtiyaar oo lagu doorto isdhexgalka markii la isticmaalo markii ugu horeysay, mid ka mid ah midka hadda iyo midka kale ee xargaha.
Aad AAD ugu raacsan tahay aragtidaada mawduuca. Waxa xiisaynaya dadka caadiga ah waa inay ka fiican tahay oo sharci ahaan xor tahay.
Waxaan u maleynayaa in Libre Office uu yahay xalka ugu fiican ee dadka caadiga ah ee aan u baahnayn wax aad u balaaran sida MS Office laakiin wax aan lacag ku fadhiyin oo si sax ah u shaqeeya.
Jawaab Patricio Bustos
Waxaan ku hayaa dood adag aniga: LibreOffice waxay leedahay nooc nooca Software-ka oo bilaash ah taasna waxay ka dhigeysaa aqoontu inay bilaash tahay, sax? Salaan ka timid Loja (Ecuador).
Jawaab Pablo Ivan Correa
Ribbon waa hal-abuurka ugu fiican ee Microsoft, Xafiiska ayaa ugu fiican kan ugu fiican otomaatiga xafiiska, laakiin kama shaqeeyo Linux. Waxaan rajeynayaa in halkii aad ku dhiiri gelin lahayd "fargeeto", aad adigu iska leedahay wixii aad rabto; maskaxdu waa tan isku dhafka ah. Way hormarisaa, haa, laakiin Microsoft way dhaqso u qabataa.
Sababta kaliya ee aan ugu noqonayo qaar ka mid ah Microsoft OS waa in lagu diyaariyo * nix. Bal qiyaas W10 on Freebsd.
Ku jawaab juanperez
Aniguna taas ma wadaagi doono, waayo dhadhankeyga Ritbon wuxuu qaataa boosas fara badan wuxuuna iga buuxiyaa astaamo aanan isticmaalin. waxay kaloo qarisaa hawlo badan, oo ay tahay in la baaro si loo ogaado halka ay ku sugan yihiin.
Xafiiska Libre waxaad ka furan kartaa faylal kasta oo MS ah oo lid ku ah. Had iyo jeerna waa cabasho guud in softiweerka bilaashka ahi "ka dhaqaajiyo" sawirada, miisaska iyo wixii la mid ah meeshii ay asal ahaan ka soo jeedeen, in kasta oo ay waxyar iyo wax ka yar u dhacayaan, asal ahaan waxay u dhacdaa caado la'aanta ah in si sax ah loo isticmaalo bogagga bogga, ama hagaajinta miisaska iyo sawirrada meel kasta oo aad rabto inay had iyo jeer ahaadaan.
Mid ka mid ah sababaha kale ayaa ah isbeddelka cusub ee siyaabaha loo helo rukhsadaha MSx-ka cusub, bilo? koox ahaan? sanadle ah? waalan, fekerkeyga hooseeya tani kaliya waxay dooneysaa ku tiirsanaanta sii socota, si buuxda ayaan u fahansanahay sababaha ganacsiga laakiin laga bilaabo taas oo ah inaan bilo ka qaado bilaha shirkadda qalabkaaga daabacan waxaa jira hal talaabo oo keliya.
Dhanka kale, ma doonayo inaan isku dayo inaan sheego sababo kale oo ah midka fiican markaan shaqeynayo 2 saacadood oo isku xigta iyo midkee wax soo saar badan leh, maxaa yeelay si aad u dhiibato ra'yi la wargelinayo waa inaad leedahay isla "duulimaad" saacadood "labada nidaam.
Barnaamijka bilaashka ah waa inuu run ahaadaa, anshax iyo anshax.
Maqaalkani maaha. Waan ka xumahay, waa isku soo uruurinta beenta, iyo runta nuska ah ee ka dhigaya dhammaan dadka isticmaala softiweerka bilaashka ah inay xishoodaan
Salaan! Waad ku saxan tahay wax kasta oo aad sheegto, laakiin waa inaad fahamtaa inay ka dhib badan tahay sidii ay u muuqan lahayd sameynta maqaal run ah oo aan ku jirin beenta iyo haddii runta oo dhameystiran. Xaqiiqdii waxaan ku dadaali doonaa inaan ku qoro anshax xumo iyo anshax suuban oo ceeb ku ridi doonta dhammaan bulshada barnaamijka bilaashka ah.
Maxaa qarsoodi ah oo dheeraad ah
Waxaan u maleynayaa in qodobada badankood ay aad isugu dhow yihiin, marka laga reebo burcad badeednimada, khiyaanooyinka iyo taageerada farsamada, inta soo hartay waxay ku xiran tahay sida aad u aragto, isdhexgalka ayaa ah kan ugu yar, haddii aan jeclahay mid ka mid ah shaqaalaha Jiil Maanta waxaa lagaa isticmaali doonaa xarig, suurtagalnimada caawimaadduna way fiicantahay laakiin bini'aadamka intooda badani ma xiiseynayaan, kaliya waxay rabaan inay wax ka beddelaan dukumiintigooda
Sidaan ognahay, waxaa jira mabda 'aan ka badneyn ilbiriqsi aan ka gudubno marka aan gujino illaa xogta ay ka muuqato shaashadda, si aysan u dhicin waxa loogu yeero "Maskaxda ku faafta". Haddii in ka badan toban ilbidhiqsi ay dhaafto, maskaxdeennu durba waa "meel kale." Waxaan hayaa LibreOffice oo lagu rakibay dhowr madal (Linux, Windows XP, Windows 7) iyo, runta ayaa ah, waxaa laga yaabaa inaysan gaarin 10 ilbidhiqsi, laakiin laga bilaabo marka aad gujiso dukumiintiga illaa uu ka furmayo, weligeedba way qaadataa. Xafiiskan MS wuxuu ku guuleystey cod aqlabiyad ah.
Marka laga hadlayo isdhexgalka, Ribbon wuxuu umuuqdaa mid aan waxtar badan ii lahayn. Dhadhankaba ha lahaadee, tirada qasabadaha si aad u gaarto isla goobtan waxaa lagu dhuftay ilaa seddex marka loo eego iskuxirka LibreOffice ama isku xirkii hore ee MS Office laftiisa. Waxaan maalin walba la shaqeeyaa erayga ereyga iyo, runta, aakhirka waxay noqotaa mid quus ah.
Jawaab Juan C.
MS Office si dhakhso ah ayuu iigu shaqeeyaa, laakiin mararka qaarkood sidoo kale wuxuu u furaa si gaabis ah, dhibaataduna waxay tahay ma garanayo inay tahay xafiiska, kombuyuutarkayga ama inuu virus yahay.
Dhibaatadu waa Helitaanka iyo ganacsiyada yaryar ee ka shaqeeya bartaas. Isla marka la ogaado hab looga tago kaydadka macluumaadka oo aad ugu eg Libreoffice, socdaalku wuu ballaadhan yahay. Shaqadayda waxaan ku isticmaalnaa saldhig fudud dhibtuna waxay tahay… Abuuritaankeeda laga soo bilaabo xoq waa waqti qaadis iyo qaali.
Runtii, runtii waxaan la kulmay dhibaatadaas, barnaamijyo badan oo yar yar oo 'Acces' ah, iyo 'Libre' ayaa waddada uga tagay.
Ku jawaab Fertango
Anigu waxaan ahay taageere weyn oo Software-ka Bilaashka ah, sidaa darteed, Libreoffice. Mashruucan weyn ee Office Suite waa jawharad weyn, oo aan xitaa ku sameeyay tabarucaadayda maaliyadeed ee yar.
Laakiin halkaa laga bilaabo in lagu beddelo MSOffice, weli waa riyo tuubbo ah.
Qof kasta oo si dhab ah u shaqeeyay, abuurista dukumiinti dhaadheer oo leh sawirro badan, miisas iyo tixraacyo, wuxuu eegi doonaa xaddidaadaha wali ka jira Libreoffice.
Maqaalkani ma i siinayo wax ujeedo ujeeddo ah oo isbarbardhig ah, ka soo horjeedka ayaa ah mid shakhsi ahaaneed.
By the way, MSOffice qasab maahan in la afduubto, si fudud ayaa loo iibsadaa, sida midkeen kasta oo ka mid ah uu soo iibsaday kumbuyuutar oo uusan "burcadbadeed" u ahayn, barnaamijyada lahaanshuhu dembi ma aha, sidoo kalena sheydaan ma aha. Si fudud waa hal ikhtiyaar oo dheeraad ah markaad isticmaaleyso softiweer.
Jabsashadu sidoo kale jinni maaha, runtiina Microsoft MSOffice-ka aan u adeegsado waajibaadka qaabab pptx iima keenayso wax dhismo burcad-badeednimo ah maxaa yeelay waa kaligiis.
"Waa inaan u adeegsadaa waajibaad" waxaa jira su'aasha, adigu adigu waad sheegaysaa, waajibaad, runtiina waxay tahay in qofna uusan ku qasbanayn. Waxaan dhihi lahaa 90% dadka isticmaala xafiiska Microsoft ma isticmaalaan 100% wanaagga software-kaas, badankood waxay adeegsadaan eray ay ku qoraan qoraalada guud ama siminaaro, iwm wixii markaa aan isticmaalo Libreoffice. Waxaan ku rakibaa iyo voila, dildilaac la'aan, ama haddii antivivrus uu u qaato sidii fayras, ama aan sugo bal inaan arko nooca ugu dambeeya ee soo baxa, iyo wax aan micno lahayn. Libreoffice ayaa ku rakibaysa, waad u adeegsaneysaa iyo wax kale, waqti lumis maleh.
Ku jawaab pepe2
Sababta ugu badan ee Pepe2, waxa ku dhacaya kiiskeyga ayaa ah in dhalada ay tahay inaan isticmaalo qaabka pptx, ma isticmaali lahaa.
Reyshii Crhistian dijo
Waxaan u maleynayaa inaysan jirin isbarbardhig, inkasta oo labaduba ay yihiin xafiisyo xafiis, mid kastaaba wuxuu raacayaa ujeedooyin kala duwan.
LibreOffice waa mashruuc ay maalgelisay The Document Foundation, oo ah aasaas aan faa'iido doon ahayn. In kasta oo MS Office uu yahay guri ay leedahay shirkadda Microsoft, isla markaana ay ku dhowdahay hanti-wadaag caalami ah oo softiweer ah.
In kasta oo dadaalada TDF ay diiradda saareen keenista heerarka dukumiintiyada elektiroonigga ah ee heer ballaaran iyo u ololeynta falsafadda furitaanka; MS wax soo saarkoodu wuu ka sii yaraanayaa heerkiisuna aad buu u sii yaraanayaa.
Farqiga aasaasiga ahi markaa wuxuu ku jiraa Xorriyadda, dhinacyada kale waa kuwa labaad.
Ugu danbeyntii waxaa harsan in la isweydiiyo, xornimo ma rabtaa mise? Haa, ka dib dooro LibreOffice. Maya, sii wad adeegsiga MS Office.
Ujawaab Crhistian Reyes
Waan jeclahay Linux, waxaan ahay qof aamin ah oo adeegsada waana jeclahay faa'iidooyinkiisa, mashaariic waaweyn, iwm, laakiin hadii Linux wax ka maqnaadaan, waa qol xafiis oo run ah, ma dhahayo LibreOffice waa xun yahay, laakiin waa wax aad u yar , oo leh qalab aad u tiro badan oo ay MSOffice bixiso, sidoo kale dhamaan qodobada aad ku qeexday qodobkaan ma ahan sababo adag (ma ahan in la yiraahdo sababo soo noqnoqda oo isku dayaya in ay u gudbiyaan bulshada Linux dadka kale iyagoon helin wax natiijo ah) si aad qof ugu sheegto, u haajir LibreOffice , nasiib daro tan aad, sida loo dhaho, isla wax duug ah. Salaan.
Sannadihii aan isticmaalayay kombuyuutarrada, waxaan u adeegsaday tifaftireyaasha qoraalka labadaba (xaqiiqdii in ka badan 90% taasi waa waxa ay qabato) ... Waxaan ula jeeday tifaftirayaasha qoraalka cad, ... runtiina waa isku mid sababta aan ugu fiirsado LO, Waxay i siineysaa waxa aan u baahanahay, waligey ma fahmin sababta ay u doonayaan inay isbarbar dhigaan, waxaan u maleynayaa in dhinac ama dhinac kale, kan run ahaantii doonaya inuu ka faa'iideysto fursadahooda ugu badnaan, midkood ama midka kale, waxay noqon doontaa oo keliya arrin daraasad iyo barasho leh. Intaas wixii dhaafsiisan, qofkii raba inuu bixiyo wax lagu qaban karo bilaash… si fiican !!!! Dhadhanka midabka.
Dadku ma garanaynin sida loo isticmaalo muddo dheer, waxaan nahay taageerayaal uun.
Laba tusaale oo yaryar:
Kudar pdfimport adiguna waad tafatiri kartaa pdfs iyo foomamka daboolka, iwm.
Ku dar beddelaha epub oo waad soo saari kartaa epubs sida pdf oo kale.
Oh, waxay ka shaqeeyaan labada Libre iyo OPenOffice.
Jahannamo maahan laakiin OpenOffice waxay ku jirtaa qaybta afraad, waxay leedahay rukhsad Apache, kuma tiirsana wax badan Java, waxayna u oggolaaneysaa qaabab badan.
Si kastaba xaalku ha ahaadee, addons waa wax caadi ah
Ah, addon si loo soo saaro epub waxaa loo yaqaan Writer2epub oo PDFImport wuxuu ka yimid Qorraxda hadana waxaa cusbooneysiiyay Oracle, iyadoo kuxiran nooca Libre / Open Office ee aan adeegsano, waxaa lagu magacaabaa Sun PDFImport (nooca 3) ama Oracle PDFImport (Nooca 4). Waxay kuu ogolaaneysaa inaad soo dejiso PDF-yada oo aad cusbooneysiiso inta jeer ee aad rabto.
Kani waa qormadii ugu darnayd ee aan ku akhriyo meeshan. Waxaad moodaa inuu qoray wiil 10 jir ah oo aduunkan uun wax ka baranaya. Waxyaabaha qaarkood ee la fiirinayo:
1- Isticmaal wanaagsan oo adeegsadeyaal ah: Waa maxay? Haddii aan jeclahay xarigga, markii ay ka beddeleen xafiiska 2003 una beddeleen xafiiska 2007 wixii ugu horreeyay ee aan sameeyay waxay ahayd inaan ku faraxsanahay inaan beddelo interface-kii hore oo aan u mahadceliyo microsoft oo sameeyay mid ka mid ah waxyaabaha aan si fudud uga heli karo.
2- Waxaan iska ilaalinaa sharci-darrada (burcad-badeednimada): Waxaan u isticmaalaa xafiiska 365 anigoo raalli ka ah bixinta lacag yar oo bille ah maxaa yeelay waa software weyn.
3- Way ka shaqeysaa si fiican: Aha dabcan oo waxaan ahay Bill Gates, xafiiska Libre waligiis uma shaqeyn si kafiican xafiiska Microsoft, had iyo jeer wuxuu ahaa bedel bilaash ah, warqad-xisaabeedka bilaashka ah waa ceeb tusaale.
4- Taageero farsamo oo fiican: Haddii aad ku taageerto farsamo waxaad ula jeedaa beel mararka qaar wax wax weydisa oo ay kuu diraan si aad si fiican ugu raaxaysato ...
5 - Suurtagalnimada caawinta: Microsoft waxaad fursad u leedahay inaad tijaabiso betas, haa, waa software-lahaansho iyo wax kasta oo aad rabto laakiin waa waxa ay tahay.
6 - No crapware: Tani waa qodobka ugu xun ee aan akhriyay, haddii aadan xitaa aqoon sida loo rakibo softiweer qaab habdhaqameed sida barnaamijyada kale si aad u rakibto waxa aad u baahan tahay oo keliya (xafiisku wuxuu la imaanayaa tiro badan oo qalab ah dabool waxyaabo badan, laakiin haddii aadan u baahnayn waad codsan kartaa inaadan rakibin) waa inaad tahay qof kumbuyuutar fiican oo aanad u qalmin inaad halkan u timaado si aad ugu qorto qoraal boggan.
1- Waa arin fikrado ah, waa sababta aanan u doodi karin.
2- Maxaad ugu bixinaysaa wax aad lacag la’aan ku haysato. Iyo, inaad ka mid tahay 3% mooyee oo aan iyaga gaarin, ama aadan ogeyn ama aadan rabin inaad beddesho.
3- Waxay u shaqeysaa si kafiican, hadii aad adeegsato qaababaka MSOffice-ka sida iska cad, isku day qaababka furan.
4 - Waxay kuu diraan TPEC markaad rabto inaad ka beddesho macro ba'an oo ka socda MSO.
5 - Halkan waxaad kala soo baxaysaa markasta oo aad rabto.
6 - waan ogolahay.
Waxaan ka hadleynaa isticmaaleyaasha, maahan shirkadaha.
Tani macnaheedu maahan in shirkad aysan awoodin, waxay ka dhigan tahay haddii aad haysato 10 sano oo tayo sare leh aad tahay maxaabiis.
Ka bilow xoq oo ii sheeg. Ama ha ku barnaamijka barnaamijka Excel, taasi maahan luuqad barnaamij, waa inaad isku xirto naftaada ku tiirsanaanta.
Maxaad ugu bixinaysaa wax aad lacag la’aan ku haysato? Way fududahay, sababtoo ah adeegyada kale ee xafiiska 365, 1TB ee daruurta i siiya, suurtagalnimada awood u lahaanshaha feyladayda qalab kasta, xafiiska ku isticmaal ipad, waa inaanan bixin kaliya qolka xafiiska.
Oscar ahaan, su'aal doqonimo ah, miyaad ogtahay meesha aad dhigato iPad-kaaga, iPhone-ka, iwm, dukumintiyadaada? Su’aashu way fududahay, ii sheeg tusaha.
Hadaad ogtahay, waan iska aamusayaa, hadaadan ogayn, su'aasha ku xir shabakada.
Waan ogahay meesha aan ku haysto. Waxaa laga yaabaa inaanan iskula jaan qaadin hab dareen leh, laakiin dhab ahaantii si badan oo gaar ah.
Haddii aad ku lug lahaan doontid arrinta asturnaanta waxaan horeyba u taabaneynaa arrimo kale oo sidoo kale taabashada kubbadaha, waxaan ka hadlaynaa qolka desktop-ka, muddada. Haddii aan taas bixiyo, taasi waa dhibaatadeyda, ma jecli xafiiska bilaashka ah, weligey ma jeclaan, weligey igama caawinin inaan ka shaqeeyo waraaqo, ka shaqeynta nooca dukumiintiga qoraalka ah ee aan shaqeeyo waa ceel. Jooji buuxa, maxaad isugu daydaa inaad qof ku qanciso inuu xirto wax uusan rabin inuu isticmaalo?
Cidina kuuma sheegin inaad bedesho, ugu yaraan aniga ma ihi. Waxaad arkaysaa, sida Linux oo kale, isticmaal waxaad rabto.
Salaan. Miyaan ku dhejin karaa obuntu ama xafiis bilaash ah laptop-kayga, halkaan horeyba u isticmaalayay win8.1?
Waad awoodaa, laakiin maadaama aad taas horey u heshay, caawimaad weydiiso. Adiga ayaa ubaahan. Aan aragno markaad wax iibsatay adoon haysan OS-ka horey loo rakibay.
sidoo kale waxaad ku rakibi kartaa xafiis bilaash ah daaqadaha
ugu badnaan dijo
20-kayga sannado badan ee isticmaalka kumbuyuutarka waxaanan arkay xafiiska iyo daaqadaha oo isbeddelaya.
Isbarbar dhigga baabuurtuna wuu wanaagsan yahay, cilado ayuu leeyahay, waanu dayactirnaa oo waan hagaajineynaa, waan sii wadnaa isticmaalkeeda, ma iibinno oo mid kale ayaan ugu beddeleynaa. Waanan ka ogahay xafiiska noocyadiisa ugu horreeya Suuqgeynta iyo kaalinta ugu sarreysa ee shirkadahaani ku leeyihiin warbaahinta iyo shirkadaha ayaa ka muhiimsan. Haddii ay tahay inaan iibsado, waan hubaa inaanan sameyn doonin maxaa yeelay ma iibsado waxyaabo fashilmay.
salaan ka timid Argentina
Ugu jawaab maximo
Wanaagsan: Waxaan rabaa inaan idhaahdo ugu horaynba, inaan maalin walba aqriyo blogka runtiina waan jeclahay qoraalada aad daabacdo. Laakiin tan midna kuma raacsani. Ogow inaan ka soo dhaqaaqay Windows illaa Linux 1 sano ka hor aadna aan uga fiicanahay Linux oo aan adeegsanayo ikhtiyaarrada bilaashka ah. Sidaa darteed, ujeedkeygu ma ahan inaan u difaaco xafiiska MS adeegsiga Windows-ka. Kaliya waxay ila tahay aniga inay tahay in wax loo sheego sida ay yihiin, halkii laga bixin lahaa cudur daar in meel la iska dhigo software-ka lahaanshaha. Xaqiiqdii, looma baahna cudurdaar. Laakiin ka hadli maayo faa iidooyinka iyo faa iidooyinka softiweer ee bilaashka ah hada, waxaa horey ujiraa qormooyin aad ufiican dhamaan internetka Marka la eego sabab kasta oo qoraa:
1) Isdhexgal Wanaagsan oo Isticmaalaha: Waan ku raacsanahay. In isbedelada isticmaalaha la badalay micnaheedu maahan in kan cusub uu xun yahay ama ka xun yahay. Windows 8, wuxuu ahaa isbedel aad u weyn inkasta oo qaar badani ku neceb yihiin taas, waxaan u isticmaali jiray tan iyo markii ay soo baxday ilaa aan u wareegay Linux, waxaanan rabaa inaan ku adkeeyo inay waxtar badan leedahay oo aad uga wanaagsan tahay kordhinta wax soo saarkeyga. Sidoo kale, fikraddaadu waxay noqon kartaa in isku xirnaanta xargaha uu xun yahay, taydu ma ahan, laakiin ma jirto run run ah, waxay ku socotaa mid kasta.
3) Si kafiican ayuu u shaqeeyaa: Waan diidanahay. Labadaba xafiis furan iyo xafiiska libre labaduba sifiican ayey u shaqeeyaan, laakiin xafiiska ms sidoo kale wuu shaqeeyaa. Waa in lagu daro in laga yaabo inay tahay sheyga ugu fiican ee Microsoft.
4) Microsoft, in kasta oo aanu xor ahayn, haddana waxay leedahay beel aad u ballaadhan oo internetka had iyo jeer waxaa laga helaa macluumaad badan oo ku saabsan Windows iyo Office. Dhinaca kale, alaabada otomaatiga xafiiska guud ahaan wax badan ayaa is beddelay oo mar dambe looma baahna in loo baahdo in dhibaatooyinka lagu xalliyo.
6) Crapware No: Qodobkani wuxuu ku egyahay aniga oo ii muujinaya inaad wax ka qorayso wax aad gebi ahaanba jaahil ka tahay. Waa run in haddii aynaan dhag u dhigin aan rakibi doonno barnaamijyo dheeri ah oo laga yaabo inaanan isticmaalin, laakiin taasi waxay sidoo kale ku dhici kartaa xirmooyin kale oo badan. Xaqiiqdii, xaaladdan, ma ahan fure. Haddana waxaan ku adkaysanayaa, xafiiska MS waa badeecada ugu fiican ama qaybaha ay soo saarto shirkaddaas, xitaa marka aanan ku raacsanayn falsafadeeda iyo falalkeeda badan.
Waxaan ku soo gabagabeynayaa, ma weerari kartid cadow adigoon ogeyn.
Xafiiska M. haddii uu jiro Crapware, waxaa jira adeegyo asal ah oo socda oo aadan waligaa u isticmaalin hubiyeha shatiga ee macluumaadka u diraya Microsoft waxayna sidoo kale noqon karaan albaabbada.
Haddii ay jiraan wax aan fiicnayn, waa dadkaas kuwa wax ku qoraa sarbeeb xun, sida Gabriela González ay ku sameyso Hypertextual, oo ku dhaarta inay tahay mid qosol badan.
Ku saabsan boostada, haddii aad rabto inaad sheegto sababahaaga, waa hagaag, laakiin laguma dabaqo 80% waqtiga. waa inaad sameysaa qoraal ku saabsan sababta AAN loo isticmaalin libreoffice, maxaa yeelay ma ahan sidoo kale waxyaabo wanaagsan sidoo kale
Ku jawaab Holiwii
Waad ku mahadsan tahay qoraalkaaga, waxay iga caawisay inaan qabto hawl aanan doonaynin inaan ka fikiro